७५ हजार तालिबानले ३ लाख अफगान सेनालाई कसरी जित्यो? - Dainik Online Dainik Online
७५ हजार तालिबानले ३ लाख अफगान सेनालाई कसरी जित्यो?
प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०७८, शुक्रबार ३ : ४४
यसैवर्षको जुलाई ८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र पत्रकारहरुबीच सवाल–जवाफ भएको थियो।
सवालः के अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा गर्नसक्छ?
जवाफः होइन, त्यस्तो हुन सक्छैन।
जवाफः किनभने अफगान सरकारसँग तीन लाख संगठित सेना र वायु सेना छन् जबकि तालिबानको संख्या करिब ७५ हजार मात्र हो। तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गर्न असम्भव छ।
यही पत्रकार सम्मेलनमा बाइडेनलाई तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गर्नेमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन भनेर प्रश्न गरिएको थियो। उनले जवाफमा के हो गम्भीर प्रश्न हो र भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। पत्रकारले यो साँच्चै गम्भीर सवाल हो भनेपछि बाइडेनले भनेका थिए,‘म तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गर्नेमा विश्वास गर्दिन।’
केही अन्य प्रश्नमा राष्ट्रपति बाइडेनले सन् २००१ पछि तालिबान सैन्य रुपमा अहिलेसम्मकै मजबुत स्थितीमा भएको स्वीकार गरेका थिए। तर संख्या कम भएकाले देश नै कब्जा गर्ने अवस्थामा तालिबान नभएको उनको धारणा थियो।
बाइडेनले यो अन्तवार्ता गत महिना मात्र दिएका थिए र एक महिनापछि पुरै अफगानिस्तान तालिबानले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। यसले के देखाउँछ भने अमेरिकालाई तालिबानको क्षमता र शक्तिमा साथै अफगान सेनाको कमजोरीबारे ज्ञान नै रहेनछ।
बाइडेन मात्र नभएर पुरै विश्वभरका नेताहरु तालिबानले यति छिटो कसरी अफगानिस्तान कब्जा गरे भनेर तीनछक्क परेका छन्। अमेरिकी गुप्तचरहरुको रिपोर्टले ९० दिन भित्रमा राजधानी काबुलसम्म तालिबान आईपुग्ने अनुमान गरेको थियो। तर तालिबानलाई पुरै अफगानिस्तान कब्जा गर्न एक महिना पनि लागेन।
अफगान सेनाको वफादारीमा प्रश्न, सैन्य भ्रष्टाचार र छली
अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनः उदय हुनुमा सरकारी सेनाको वफादारीतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ। ७५ हजार तालिबानीले ३ लाख हतियार सम्पन्न सेनालाई कसरी जित्नसक्छ? भनेर सवाल गर्न थालिएको छ। अजमल अहमदी अफगान बैंकका गभर्नर थिए साथै उनी राष्ट्रपति असरफ गनीका आर्थिक सल्लाहकार पनि थिए। १६ अगष्ट साँझ उनले एक ट्विट गर्दै देश छाडेर भागेको पुष्टि गर्दै अफगान सुरक्षा बलको वफादारीतामा प्रश्न गरेका थिए।
अहमदीले लेखेका थिए,‘पछिल्लो हप्ता अफगानिस्तान सरकारको पतन यति चाँडै र सजिलै भएको छ कि यो विचलित गर्ने खालको र कल्पना गर्न पनि मुश्किल छ।’ उनले ग्रामीण इलाका तालिबानको हातमा जान धेरै समय लागेको तर पहिलो प्रान्तीय राजधानी मात्र एक हप्तामा कब्जा हुनुलाई सन्देहपूर्ण मानेका छन्। त्यसपछि लगातार प्रान्तीय राजधानीहरु तालिबानको नियन्त्रणमा जान थालेका थिए।
उनले ट्विटरमा हेरात शहर कब्जा हुनुमा र बाल्ख प्रान्तको राजधानी कब्जा हुनुमा त्यहाँका गभर्नर र सेना प्रमुखलाई दोषी मानेका छन्। उनीहरुले सेनालाई युद्ध नगर्न दबाब दिएका कारण त्यहाँ तालिबानीले सजिलै नियन्त्रण हासिल गरेको उनको टिप्पणी छ। बाल्ख प्रान्तका गभर्नर अत्ता मोहम्मद नुरले कडा प्रतिरोधका बाबजुद आफूहरु तालिबानसँग हारेको र आफ्नो हतियार तालिबानले लगेको ट्विटरमा बताएका थिए।
त्यस्तै ‘हेरातको बाघ’ भनेर चिनिने सैन्य कमाण्डर इस्माइल खानलाई तालिबानले युद्ध जितेर गिरफ्तार गरेको खबर आएको थियो। अहमदी भन्छन्,‘मैले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। तर सन्देह यो मानेमा छ कि सेनाहरुले यति चाँडै किन सैन्य पोस्ट छाडे। कुरा प्रस्ट छैन।’
बीबीसीका रक्षा मामिलाका संवाददाता जोनाथन बिलका अनुसार नेटोमा आवद्ध अमेरिकी तथा बेलायती सेनाले अफगान सेनालाई प्रशिक्षण दिएर बलियो बनाएको दाबी गरेका थिए। तर आज त्यो सबै मजाक बनेको छ। बिलका अनुसार अफगान सरकारले तालिबानलाई रोक्न सक्नुपर्थो। उनका अनुसार तथ्यांक मूल्यांकन गर्दा तालिबानभन्दा सरकारी सेना बढी थिए। तालिबानी ७५ हजार थिए भने अफगान सेना ३ लाखभन्दा बढी।
तर उनी भन्छन्,‘वास्तवमा अफगानिस्तानले सैन्य भर्ती लक्ष्य पुरा गर्न सँधै संघर्ष गरेको छ। अफगान सेनामा भ्रष्टाचारको इतिहास छ। केही बेइमान कमाण्डरले सेना नै नभएकाको नाममा तलब खाने गरेका थिए।’ बिलका अनुसार स्पेसल इन्स्पेक्टर जनरल फर अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्सन एसआईजीएआरलाई नै अफगान सैन्य संख्यामा सन्देह थियो।
एसआईजीएआरको यसैवर्षको प्रतिवेदनअनुसार अफगानिस्तानको सुरक्षाको लागि ८८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च भएको छ। हतियारहरु पनि अफगान सेनासँग अत्याधुनिक थिए। यो पनि आशा गरिएको थियो कि अफगानिस्तानको वायु सेनाले तालिबानबिरुद्धको युद्धमा महत्वपूर्ण नेतृत्व दिनेछ। तर अफगानिस्तान हवाई सेनाले आफ्नो २११ विमान र चालक दलको संख्या कायम राख्न संघर्ष गरिरहेको थियो।
यसैका कारण हवाई सेनाले थल सेनाका कमाण्डरहरुको माग पूरा गर्न असमर्थ भए। हवाई सेनाले तालिबानलाई निशाना बनाउन नसक्दा झनै समस्या बढेर गयो। अफगान सेनामा व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रशिक्षणको कमी र खराब नेतृत्वको कारण उनीहरु तालिबान अगाडि टिक्न नसकेको विश्लेषण गरिन्छ। नेटोका सेनाको भरमा पुरै देश थियो। जसका कारण नेटोका सेना फर्कना साथ तालिबानले पुरै देश कब्जा गरिहाले। बीबीसीहिन्दी र एजेन्सीको सहयोगमा